Ciidamada Booliska iyo Nabad sugidda Galmudug oo gudaha uga galay deegaanka Baxdo +(SAWIRRO) | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Ciidamada Booliska iyo Nabad sugidda Galmudug oo gudaha uga galay deegaanka Baxdo...
Ciidamada Booliska iyo Nabad sugidda Galmudug oo gudaha uga galay deegaanka Baxdo +(SAWIRRO)
Galgaduud (Halqaran.com) – Ciidamada Booliska iyo Nabad Suggida Galmudug oo wata gaadiidka dagaalka ayaa gudaha u galay Deegaanka Baxdo ee Gobolka Galgaduud, iyagoona xalay illaa saaka hawlgalo amni xaqiijin ah ka sameeyay.
Labada ciidan ayuu ujeedkoodu ahaa in ay hawlgalada kaga hortaggaan kooxaha lagu eedeeyo inay dadka dhibaateeyaan, xilliyada qaarkood.
Dadka deegaanka ayaa Warbaahinta u sheegay in labada ciidan oo gaadiidka dagaalka wata ay yimaadeen deegaankaasi, isla-markaana ay ka sameeyeen hawlgalo amniga lagu suggayo.
Saraakiisha Nabad Suggida iyo Booliska ayaan wax war ahi ka soo saarin hawlgaladooda Deegaanka Baxdo, waa haddii ay dad ku soo qab qabteen iyo haddii kalaba.
Si kastaba, maamulka Galmudug ayaan si rasmiya uga hawlgelin Deegaanka Baxdo, balse waxaa xilliyada qaarkood si kedis ah ku tagga xoogaga amniga.
Ciidamada Booliska iyo Nabad sugidda Galmudug oo gudaha uga galay deegaanka Baxdo